अब कति दिन पानी पर्छ ? यस्ताे भन्छ माैसम विभाग | Biswas News
अब कति दिन पानी पर्छ ? यस्ताे भन्छ माैसम विभाग
चैत २४, काठमाडौं- केहि दिनदेखी प्रभावित मौसम सोमबार देखी सुधार आउने भएको छ । पश्चिमी वायु र स्थानिय वायुको प्रभाबले केहि दिन यता प्रभावित मौसम सोमबार देखी सुधार हुदै जाने जल तथा मौसम पुर्व अनुमान महाशाखाले बताएको छ ।
उक्त वायुको प्रभावले आज देशभरि नै आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका पूर्वी तथा मध्य भू–भागका एक दुई स्थानमा हावाहुरी र मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सोमबार पश्चिमी क्षेत्रबाट क्रमिक सुधार हँुदै जाने छ ।
मध्य र पूर्वी क्षेत्रको मौसम भने एक÷दुई दिन प्रभावित नै हुने मौसमविद् पौडेलले बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिबाट मौसम सुधारहँुदै जाने बताइएको छ ।
Previous articleयस कारण महँगो छ नेपालमा मोबाइल डाटा
Next articleभिजाएको कपडा फ्रिजमा राख्दा के हुन्छ ? यस्ता छन फाइदाहरु